Wufuud Kusii Qul Quleysa Magalada Dhuusamareeb | Allmareeg Online
Home Xogta Maanta Wufuud Kusii Qul Quleysa Magalada Dhuusamareeb
Wufuud Kusii Qul Quleysa Magalada Dhuusamareeb
Wafuud kala duwan oo ka kala socda Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Beesha caalamka ayaa saacadihii la soo dhaafay gaarayay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Maamulka Galmudug.Sidoo kale, waxaa magaalada ku sii qul qulaaya ergooyin kala duwan oo doonaya inay ka qeyb galaan Shirka dib u heshiisiinta beelaha Galmudug oo dhawaan halkaasi ka furmaya.
Ergooyinka ayaa dhamaantood waxaa ay ka kala imaanayaan deegaannada Mudug iyo Galgaduud ee uu ka kooban yahay Maamulka Galmudug, iyada oo lagu soo dhaweynaayo Magaalada Dhuusamareeb oo ay taallo gogosha dib u heshiisiinta.
Xubnaha guddiga qaban qaabada shirka dib u heshiisiinta Beelaha Galmudug ayaa xalay waxaa ay soo saareen habraaca uu ku furmi karo shirka,iyada oo guddiga qaban qaabada shirka ay wadaan kulamadii ugu dambeeyay oo ay la yeelanayaan Bulshada Magalada Dhuusamareeb.
Waxaa sidoo kale Magaalada Dhuusamareeb laga dareemayaa qaban qaabadii u dambeysay ee uu ku qabsoomida shirkaas oo la filayo in uu billaawdo 17 bishaan oo ku beegan Sabtida soo socota,waxaana aad loo adkeeyay Amniga Guud ee Magalada Dhuusamareeb.
Dhinaca kale waxaa jira Beelaha qaarkood oo dega deegaannada Galmudug sida Magaalada Cadaado inay horay u sheegeen inaysan ka qeyb gelyn shirka dib u heshiisiinta ee Magalada Dhuusamareeb, iyaga oo soo bandhigay shuruudo kala duwan.
Previous articleGeneral Galaal ” Habargidir oo heshiisay waa Somaliya oo heshiisay”
Next articleXildhibaanada Cusub ee Baarlamaanka Jubbaland oo maanta lagu dhaariyay Magaalada Kismaayo. (Sawirro).
Taliska ciidamada Booliska oo ka hadlay dagaalka ka socda gudaha Hotelka SYL
Xaaf oo kulan xasaasi ah la yeeshay Wafdi culus oo ka socda Beesha caalamka
Cabdulahi wiire - October 7, 2019 0
Dowlada Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa horay ugu guuleeysatay in Ahlusunna lagu qanciyo ka mid ahaanshiyaha Maamulka Gal-mudug taasi oo ay diidanaayeen in mudo...
Somalia’s president is no ally against terrorism.
Dil ka dhacay Xaafad ka tirsan Magaalada Muqdisho
Mareeg Ali - August 20, 2019 0
Kooxo hubeysan ayaa maanta Isgoyska Sanca ee magaalada Muqdisho ku dilay Askari katirsanaa Ciidamada dowladda. Goobjoogayaal ayaa sheegay in koox bistoolado ku hubeysan ay bartilmaamed...